Uganda oo mamnuucday sooryo lala noqdo - BBC News Somali
Uganda oo mamnuucday sooryo lala noqdo
6 Agoosto 2015
Maxkamadda Sare ee dalka Yuganda ayaa xukuntay in dhaqanka ah in lacagta sooryada ah dumarka laga noqdo marka la furo ay tahay mid ka dhan ah dastuurka dalka Yuganda oo ay tahayba in dhaqankaas la mamnuuco.
Xaakimadda ayaa sheegay in dhaqankaasi uu ka dhigayo dumarka kuwa meel suuqa ah lagu kala gato, isla markaana uu xad gudub kuyahay xaqa ay u lee yihiin in ay ninka ay is furaan.
Ololeeyayaasha ayaa sheegay in sooryadu ay ka dhigayso qofka dumarka ah in ay qeyb ka tahay hantida ninkii qabay.
Dalka Yuganda haddii guurka lamaanuhu uu shaqeyn waayo, qofka dumarka ah ayaa laga filayaa in ay dib u soo celiso sooryadii horay loo siiyay - inta badana waxaa lagu bixiyaan sooryadaasi xoolo la dhaqdo.
Hase ahaatee, waxaa lagu dooday maadaama dumarku ay ka xoolo yar yihiin raggii qabay, taasi waxay keentay in dumar badan ay ku lug xirmaan guur aysan ku faraxsaneyn.
Dacwada la xiriirta sooryada lala noqonayo ayaa waxaa maxkamadda Sare u soo gudbiyay hay'adda u ololeysa xuquuda dumarka ee Mifumi oo sheegtay in sooryadu ay dhiirogaliso in raggu ay dumarkooda garaacaan.